Mividiana zava-mahadomelina marani-tsaina tsy misy preskripsi ary manomboka miaina tsy manam-petra [OneClick]
Inona no atao hoe ADHD?
Betsaka ny olona manontany antsika hoe "inona no dikan'ny ADHD?". Ny dikan'ny ADHD dia Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ny aretina dia matetika mitombo mandritra ny fahazazany, nefa indraindray tsy voamarina akory mandra-pahatongan'ny fahatanorana na ny fahalehibeazana.
ADHD dia miavaka amin'ny tsy fahafahan'ny olona mifantoka na mitandrina. Ireo mijaly dia mampiseho ny tsy fahamendrehana, ny fikorontanan-tsaina ary ny fahatsapana tsy fandaminana. Tsy manam-paharetana koa izy ireo ary variana mora foana, na dia manao zavatra mahaliana azy ireo aza. Ny toe-javatra dia matetika no raisina ho toy ny aretina satria afaka manelingelina ny fizotran'ny fianarana amin'ny fomba manaitra izy io.
Betsaka ny resabe manodidina ny famaritana ny ADHD. Ny olona sasany dia mahita fa tsy marina, be loatra, tsy mety ary manafintohina mihitsy aza ny fanampiana ny "hyperactivity" amin'ny famaritana. Satria matetika ny ankizy no mahita io aretina io, dia maro no mino fa voan'ny aretina mihombo na hosoka ataon'ny indostrian'ny saina sy ny fanafody any amin'ireo fianakaviana manandrana mahatakatra ny zanany mahafinaritra azy io. Misy kely ny zavatra takarina momba an'io toe-javatra io amin'ny fomba fijery siantifika.
Antony ADHD: inona no mahatonga ny ADHD?
Ny fanontaniana mipoitra ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona rehefa sendra olona iray voan'io aretina io dia "inona no mahatonga ny ADHD?". Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala ny antony mahatonga ny ADHD na ny soritr'aretin'ny ADHD. Izany no antony, ny tahan'ny olona voan'io aretin-tsaina io, dia mitombo isan'andro. Mba hahafantarana ny soritr'aretin'ity aretina ity sy ny fitsaboana azy tsara, ny olona dia tokony ho mailo amin'ny antony mahatonga ny ADHD. Mety hiteraka korontana io.
Amin'ity fizarana ity dia asehonay ireo anton-javatra izay mitarika amin'ny aretin-tsaina amin'ny fihenan'ny fihenan'ny saina amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy araka ny hitan'ny mpikaroka.
Ny antony mahatonga ny ADHD amin'ny olon-dehibe
Ny antony marina mahatonga ny ADHD dia mbola tsy hita. Na izany aza, fikarohana marobe no nandinika fanazavana azo atao isan-karazany.
Genetika sy neurolojika
Ny toe-javatra dia toa vokatry ny makiazy nataonao. Ny aretin-tsaina dia mahazatra kokoa amin'ny havan'ireo olona miaraka aminy noho ny olona tsy manana, ary ny kambana dia azo inoana kokoa fa hanana an'io aretina io raha manana ny rahalahiny / rahavaviny kambana. Na izany aza, zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fananana olona iray ao amin'ny fianakavianao miaraka amin'ny ADHD dia tsy midika hoe hanana ADHD tokoa ianao. Ny fananana ny fototarazo ho an'ny ADHD dia tsy mahatonga anao hanana aretina; midika fotsiny izany fa mety manana izany ianao.
Ny olona voan'ny ADHD dia naseho fa manana ambaratongam-pandehanana samihafa amin'ny faritra sasany amin'ny ati-doha, toy ireo faritra eo anoloana ny ati-doha izay tafiditra amin'ny fandaminana sy ny fifehezana ny fitondran-tena. Ary koa, ny faritra ao amin'ny ati-doha izay tafiditra amin'ny fifehezana ny hetsika dia mampiseho fahasamihafana. Mety izany no mahatonga ny ankizy voan'ny ADHD toa mikororosy sy mihetsika tsy voafehy.
Ny mpikaroka koa dia nahita maodely momba ny fiantraikan'ny soritr'aretin'ny ADHD amin'ny faritra hafa amin'ny fiainan'ny olona. Mampiseho ny fomba mety hitrangan'ny olan'ny tsy fitandremana, ny hyperactivity ary ny tsy firosoana amin'ny fiatraikany amin'ny fiainany.
Ny antony mahatonga ny ADHD amin'ny ankizy
ADHD dia aretina miteraka fahita matetika izay misy 8% ka hatramin'ny 10% -n'ny ankizy an-tsekoly. Ny zazalahy dia telo heny eo ho eo noho ny ankizivavy no voamarina miaraka amin'izany, na dia mbola tsy takatra aza ny antony.
Ireo ankizy manana ADHD dia mihetsika nefa tsy mieritreritra, mihetsika be loatra ary manana olana amin'ny fifantohana. Mety takatr'izy ireo ny zavatra antenaina amin'izy ireo saingy manana olana amin'ny fanarahana azy ireo satria tsy afaka mipetraka mangina izy ireo, na mijery tsara, na manatrika antsipiriany.
Mazava ho azy fa ny ankizy rehetra (indrindra ny tanora) dia manao toy izany indraindray, indrindra rehefa mitebiteby na mientam-po izy ireo. Saingy ny mahasamihafa ny ADHD dia ny soritr'aretina hita mandritra ny fotoana maharitra ary mitranga amin'ny toerana samihafa. Manimba ny fahafahan'ny ankizy miasa ara-tsosialy, akademika ary ao an-trano izy ireo.
Ny tena antony?
Misy antony iray hafa mahatonga ny tsy fihoaram-pefy amin'ny fihenan'ny saina amin'ny ankizy, ny ankamaroany dia hita fa avy amin'ny lafiny biolojika. Amin'ny tranga vitsivitsy dia ny ray aman-dreny no omena tsiny noho izany toe-javatra izany, saingy inoana fa ny fiovan'ny firafitry ny atidoha dia mety ho iray amin'ireo antony manjaka. Ankoatr'izay, misy mpiasan'ny tontolo iainana mety hanova ny fihetsiky ny zaza.
Anatomy sy atidoha novaina
Ny ankizy izay fantatra fa manana ADHD dia manana fahasamihafana miavaka amin'ny asan'ny ati-doha raha oharina amin'ny namany. Ireo akora simika ao amin'ny ati-doha, izany hoe ny neurotransmitter, dia tompon'andraikitra amin'ny fihetsika toy izany. Ireto akora simika ireto dia tena ilaina amin'ny fifandraisan'ny sela misy ao amin'ny ati-doha. Ny neurotransmitter mifandraika amin'ity aretina ity, antsoina hoe dopamine, dia manjary tsy mandeha amin'ny laoniny ary vokatr'izany dia miteraka voka-dratsy izay misy ny impulsivity, ny tsy fisian'ny fifantohana ary ny hyperactivity. Ankoatr'izay, voaporofo ara-tsiantifika fa ny zaza manana aretina ADHD dia manana haben'ny ati-doha kely kokoa raha oharina amin'ny zaza mahazatra. Ny ankizy toy izany dia hita fa tsy dia mora tohina loatra amin'ny toe-java-misy izay andoavana fiderana na fanasaziana.
Ny aretina ADHD dia inoana koa fa hafindra avy amin'ny ray aman-dreny izay voan'ny tosidra. Ny zaza fahefatra izay voan'io aretina io dia manana havana ADHD. Ity aretina ity dia matetika koa hita amin'ny kambana mitovy. Misy ihany koa ny fahafahan'ny zaza mahazo ADHD raha toa ka mikorontana ara-tsaina ny ray aman-dreny.
Ireo antony mahatonga ny reny
Ireo reny bevohoka zatra mifoka sigara dia mety handrahona ny hanan-janaka amin'ny ADHD. Toy izany koa, ny fampiasana alikaola na zava-mahadomelina hafa mandritra ny vanim-potoana fiterahana dia mety hampihemotra ny asan'ny neurons izay mamokatra dopamine. Ny iray amin'ireo antony mampivarahontsana dia ny vehivavy bevohoka miharan'ny poizina simika toy ny biphenyls polychlorined. Ny simika toy izany dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny bibikely.
Ny fanjifana zava-mahadomelina toy ny kôkainina dia voaporofo hanakantsakanana ny fitomboan'ny mpandray ny ati-doha.
Ary koa, misy tranga izay tsy dia be fitiavana ireo reny ary tena manakiana mafy ny zanany. Izy ireo koa dia mirona mafy manasazy mafy ny zaza noho ny antony kely ara-bakiteny. Ny toe-javatra toy izany dia mety hampiseho soritr'aretin'ny ADHD amin'ny fihetsiky ny zaza.
Fampisehoana zaza amin'ny poizina entin'ny tontolo iainana
Ny ankizy, rehefa tratry ny poizina amin'ny tontolo iainana toy ny pliphenyl plastika sy polychlorinated, dia atahorana hahazo io aretina io. Ny fitomboan'ny fihenan'ny haavon'ny firaka dia mety hiteraka fihetsika mahery setra ataon'ny zaza iray. Ny firaka aza dia hita amin'ny fasika, vovoka ary koa amin'ny fantson-drano. Ny anton-javatra hafa azo atao amin'ny tontolo iainana dia misy ny fandotoana, ny sakafo izay misy loko artifisialy ary miharihary amin'ny jiro fluorescent. Mahaliana fa na ny siramamy aza dia voaporofo fa mitifitra ny fihetsika hyperactive amin'ny tranga sasany.
Misy antony hafa mety hampidi-doza hafa izay toa miteraka ADHD. Anisan'izany ny fijerena fahitalavitra mandritra ny fotoana lava kokoa izay mety hahatonga ny ati-doha maniry fanentanana tsy tapaka.
Ny tsy fahampiana eo amin'ny sakafon'ny zaza isan'andro izay miteraka tsy fahampian-tsakafo dia mety miteraka fiovana novaina.
Ny ankizy tsy misy fitiavana sy filaminana dia mahatsapa fa ny filan'izy ireo dia tsy fenoina ary miteraka soritr'aretina mitovy amin'ny an'ny ADHD.
Na inona na inona antony mahatonga ny ADHD amin'ny zanakao, ny fahitana azy sy ny fitsaboana azy amin'ny fotoana mety no zavatra tsara indrindra azonao atao, mba hamerenan'ny zanakao ny fiainany mahazatra. Na dia mety mitaky fotoana kely sy fitsaboana sahaza azy aza izany mba hamerenana ny zaza amin'ny toedraharaha ara-dalàna dia tokony hanana faharetana sy fahamalinana tsara izy mandritra ny fotoana fitsaboana.
Fambara an'ny ADHD: inona ireo famantarana ny ADHD?
Ny fiatrehana ny tsy fetezan'ny Hyperactivity (ADHD) dia mora lavitra. Ny fanaovana ratsy kokoa an'io toe-javatra io dia ny tsy fahafantarana raha voan'io aretina io ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny soritr'aretin'ny ADHD dia mipoitra rehefa mihalehibe ny zaza. Ary na ny olon-dehibe aza dia mety manana fotoana maro izay ahatsapany fa tsy mifantoka na variana. Mora ihany koa ny mampifangaro ireo soritr'aretin'ny ADHD amin'ny karazana olana maro hafa toy ny tsy fahaizana mianatra sy karazana olana ara-pihetseham-po hafa. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fisian'ny tranga ahiahiana ho ADHD voan'ny mpitsabo matihanina.
Betsaka ny olona manontany tena hoe "Manana ADHD ve aho?". Eny, tsy misy fitsapana ara-batana na ara-pitsaboana tsotra fotsiny azo ampiasaina hamantarana raha misy olona manana izany aretina izany. Ho an'ireo ray aman-dreny izay miahiahy fa mety manana an'io aretina io ny zanany dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny mpitsabo ilay zaza momba ny ahiahiny. Hanana lisitr'ireo soritr'aretina samihafa izy ireo ary afaka mahazo antoka fa tsy mampiseho soritr'aretina mitovy amin'izany ny zaza.
Na dia soso-kevitra foana aza ny manatona mpitsabo matihanina dia misy marika famantarana ny ADHD izay miharihary miharihary na dia amin'ireo olona tsy zatra fiofanana aza. Araka ny National Institute of Mental Health (NIMH), ireo soritr'aretin'ny ADD ireo dia voasokajy ho fanondroana telo - tsy fitandremana, hyperactivity ary impulsivity.
Ady amin'ny torolàlana
Ny iray amin'ireo vato andry amin'ny sokajy tsy fitandremana dia sahirana amin'ny torolàlana. Anisan'izany ny olana amin'ny torolàlana momba ny asa ampanaovina anao, ary koa ny tsy fifantohana tsara amin'ny tetik'asa any an-tsekoly. Ny fisafotofotoana sy ny tsy fahaizana mifantoka amin'ny lahasa tokana dia misy ifandraisany amin'ny olana amin'ny fanarahana torolàlana ihany koa.
Fidgeting sy squirming
Ny hetsika hyperactive, toy ny fidgeting sy squirming, dia mety ho mariky ny ADHD. Raha tsy afaka mijanona tsy mihetsika mandritra ny seza ianao, na manety na manetsiketsika appendage iray hatrany, dia miresaha amin'ny dokotera momba ny ADHD na olana lehibe hafa, toy ny aretin'i Parkinson na ny Tourette syndrome.
Olana amin'ny asa mangina
Na dia mitovy amin'ny tolona amin'ny torolàlana aza, ny manana olana amin'ny asa mangina dia tsy mitovy, fa mahazatra, Attention Deficit Disorder Symboms araka ny NIHM. Ity famantarana ny ADHD ity dia matetika no mifanindran-dàlana amin'ny hetsi-panoherana mahery vaika na fanamafisam-peo. Ny toerana mangina, toy ny trano famakiam-boky na hopitaly, dia matetika no toerana voalohany hamoahana an'io soritr'aretina io.
Ny tampon'ilay sokajy tsy fetezana dia an'ny tsy faharetana. Olona maro no mijaly amin'ny ambaratonga tsy manam-paharetana isan'andro. Na izany aza, rehefa miditra amin'ny faritany faratampony io tsy fahampiana faharetana io dia lasa mariky ny ADHD. Ampitahao ny fahafahanao mijanona ho tony sy mifangaro amin'ireo manodidina anao hanampy amin'ny fanazavana ity olana mety hitranga ity.
Miresaka tsy an-kijanona
Tsy misy maharatsy ny fananana toetra mibontsina na be resaka. Ho an'ny olona maro dia mahafinaritra sy mahafinaritra ity. Na izany aza, ireo izay miteny mahazatra, be loatra ary tsy misy antony dia mety miady amin'ny iray amin'ireo fambara be mpihan'ny ADHD - miresaka tsy miato.
Manonofinofy sy misavoritaka
Mitovy amin'ny tsy fahampian'ny fifantohana, ny fidirana amin'ny fotoam-panofinofisana matetika dia mifandray amin'io aretina io. Ankoatr'izay, ny manjavozavo rehefa miverina mifantoka amin'ireo nofinofy ireo dia famantarana ny ADHD. Ny olon-drehetra dia mankafy ny fitadidiana fahatsiarovana mitadidy na mamela ny sainy hirenireny tsindraindray, fa rehefa lasa tsy voafehy io hetsika io dia mety ho fotoana handinihana fanampiana.
Manelingelina ny hafa ary manahirana amin'ny resaka
Na ny olona be fiaraha-monina indrindra aza dia mety mihetsiketsika sy tafintohina amin'ny resaka atao indraindray, ka mahatonga olona maro be eny an-dalana. Rehefa lasa tsy voafehy na miseho matetika loatra ireo olana ireo dia mivadika ho tranga mety hitranga ilay olana. Raha manelingelina ny hafa matetika ianao na tsy manaraka ny fenitry ny resaka mahazatra, dia mety hanasongadina olana ara-tsaina lehibe kokoa ireo fihetsika ireo. Ity dia iray amin'ireo soritr'aretin'ny ADHD amin'ny ankizy.
Familiana tsy mitandrina
Fantatrao ve fa ny iray amin'ireo soritr'aretin'ny ADHD amin'ny olon-dehibe dia ny familiana tsy am-piheverana? Rehefa manana ADHD ianao, dia mety ho sarotra be ny mitazona ny fifantohanao amin'ny làlana. Afaka variana mora foana ianao, ka mety hiteraka lozam-pifamoivoizana. Mety hahatonga anao tsy hatahotra koa ny fifamoivoizana. Ny tena mbola ratsy kokoa aza dia mety hiady hevitra sy hiady eny an-dalana ianao.
Minoa na tsia, ny iray amin'ireo soritr'aretina mahazatra an'ny ADHD amin'ny olon-dehibe dia ny olan'ny fifandraisana. Izany dia vokatry ny fahitan'ireo manana ADHD olon-dehibe sarotra ny mihaino sy mamaly amin'ny fomba mandaitra, ka miteraka tsy fifampiresahana. Lasa manahirana koa ny fanajana ny fanoloran-tena. Ankoatr'izay, ny olona manana ADHD dia mirongatra ny hatezerany tampoka ka manimba ny fanambadiana, fisakaizana na fifandraisana hafa.
Ny soritr'aretina maro hafa koa dia mifandray amin'ny ADHD. Ny tsy fahaizana mipetrapetraka amin'ny fisakafoanana hariva, mandehandeha any amin'ny toerana tsy mendrika ary mianatra sakana ka misy vokany tsara amin'ity aretina ity. Na izany aza, izy rehetra dia miditra ao amin'ireo famantarana fito lehibe kokoa ireo na mampitombo azy ireo amin'ny endrika na endrika. Raha sendra olana ianao amin'ireto soritr'aretina ireto, na fitambaran'ny maro, dia eritrereto ny fandaharam-potoana fanendrena ho an'ny diagnostika ADHD miaraka amin'ny mpikarakara voalohany anao na ny psikology rehetra mba hiadian-kevitra momba ny hetsika fanampiny.
Diagnostika ADHD: ahoana no hamaritana ny ADHD?
Ny fambara na soritr'aretina mahazatra an'ny ADHD dia misy: ny tsy fahalavorariana, ny fidgeting, ny fanelingelenana mora foana, ary ny tsy fahavitana ny lahasa. Na dia hita matetika aza ny ankizy, ny ADHD dia aretina mahazo ny olon-dehibe maro ihany koa. Betsaka ny fitsapana natao mba hanampiana amin'ny famaritana ADHD amin'ny ankizy, miaraka amin'ireo lisitra azo antoka indrindra etsy ambany.
Ny fitsapana an'i Stanford-Binet
Ny fitsapana Stanford-Binet no fanombanana malaza indrindra momba ny fahaiza-manao, fantatra koa amin'ny fitsapana IQ. Izy io dia misy fanontaniana enimpolo izay angatahin'ilay olona hamaly. Ireo valiny ireo dia tombanana mba hanomezana tombony fahaiza-manao kognitive, na IQ an'ny marary. Ity fitsapana ity dia azo raisina an-tserasera ary koa amin'ny alàlan'ny dokotera.
Ny mari-pahaizana Weschler Intelligence for Children
Fitsapana malaza ho an'ny ankizy ny Scale Intelligence an'ny Weschler ho an'ny ankizy (WISC-IV). Ny fitsapana dia atao amin'ireo ankizy eo anelanelan'ny 6 sy 16 taona ary maharitra eo anelanelan'ny 48-65 minitra mba hamaritana ny fahaizan'ny manam-pahaizana amin'ny ankapobeny. Ny fanandramana dia ahitana subtest dimy ambin'ny folo, izay refesina amin'ny indondro lehibe dimy. Ireto avy ireo: ny index index of compression, ny visual spatial index, ny fluid reasoning index, ny working memory index, ary ny index index speed. Ireo fanondroana ireo dia tombanana miaraka amin'ireo subtest dimy ambin'ny folo mba hamaritana ny fahaizan'ny olona voasedra, izay afaka manampy amin'ny famaritana ADHD.
Ny bateria Kaufman ho an'ny ankizy
Fitsapana malaza iray hafa hamaritana ny ADHD amin'ny ankizy ny Kaufman Battery for Children (KABC). Ny KABC dia fitsapana fitiliana diagnostika ho an'ny fanombanana ny fivoaran'ny kognita izay novolavolaina tamin'ny 1983 ary nohavaozina tamin'ny 2004. Ity fitsapana ity dia mampiasa fivoarana vaovao amin'ny teôlôjiana ara-psikolojika sy ny metodistika statistika, izay mampalaza azy amin'ny marary sy ny dokotera. Ny KABC koa dia manome lanja manokana ireo vondrona sy kilema misy kilemaina sembana amin'ny kilem-pianarana, ary koa ireo vitsy an'isa ara-kolontsaina.
Resadresaka amin'ny dokotera sy mizana mizana
Ho fanampin'ireo fitsapana ireo, ny marary ahiahiana fa voan'ny aretina dia afaka manao tafa sy dinika amin'ny dokotera, mandritra izany no hanaovana fizahana ara-batana koa. Ny lisitry ny lisitra fihetsika sy ny isa dia homena ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra marary hameno mandritra ny fanaraha-maso ilay olona hamaritana raha misy tranga sy soritr'aretina sasany. Ireo lisitra naoty ireo miaraka amin'ireo fitsapana voalaza teo aloha dia tapa-kevitra fa fomba mahomby hamaritana azy io.
Fitsaboana ADHD: Fanafody ADHD vs fitsaboana
Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia tadiavinao foana ny hahita ny fitsaboana tsara indrindra hanampiana ny zanakao hialana amin'ny olana haingana sy haingana. Ny zava-misy dia, tsy misy fitsaboana tsara indrindra ho an'ny ADHD ary ny zava-misy iray hafa dia, tsy misy fanasitranana ho an'ny ADHD amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tsy mila diso fanantenana ianao. Ny fitsaboana azo atao dia mbola afaka manampy ny zanakao hanana fiainana mahomby.
Fanafody ho an'ny ADHD
Fanafody ADHD ho an'ny ankizy
Ity safidy fitsaboana ity dia be mpampiasa ary mitondra vokany haingana.
Ny fanafody ADHD voalohany izay voatendry dia matetika manaitaitra. Ireo stimulants ireo dia mampitombo ny fiasa ao amin'ny ati-doha, indrindra any amin'ireo faritra tompon'andraikitra amin'ny fiheverana, ny fifehezana ny tsindrona ary ny fifantohana. Ny stimulant dia misy vokany tsara eo amin'ny fanatsarana ny fifantohana sy ny fifehezan-tena. Na izany aza, raha ny fahaizana ara-tsosialy sy ny zava-bitan'ny akademia dia miankina amin'ny zaza ihany izany. Ny fanafody manaitaitra dia tena ahitana ny iray amin'izy roa: methylphenidate ary amphetamine.
Ny safidy voalohany amin'izy roa dia ny methylphenidate satria hita fa kely kokoa ny vokany. Ny methylphenidate dia tonga amin'ny fotoana fohy, antonony ary lava. Raha tsy mamaly ny methylphenidate ny zaza dia omena amphetamines izy. Ho an'ny faharetana maharitra maharitra 6 ora, Dextrostat sy Dexedrine no voatendry. Ho an'ny faharetana antonony sy lava dia voatendry i Adderall.
Raha tsy mandaitra amin'ny zaza ny stimulant dia avy eo Atomoxetine ary Antidepressants dia voatendry. Rehefa tsy nahomby ny fitsaboana roa misy fanentanana, dia ny Atomoxetine no dingana manaraka.
Ny zava-dehibe iray manamarika momba ny fanafody ADHD dia ny tsy fisian'ny fanafody tokana izay atolotra ho an'ny ankizy rehetra. Ny fanafody dia omena araka ny tokony ho izy. Miankina amin'ny fihetsiky ny zaza amin'ny fanafody manokana ireo. Na izany aza, rehefa voafaritra ny fanafody mety, ny soritr'aretin'ny fikorontanana dia afaka tantana mora foana.
Raha misy zavatra iray hafa tokony ho fantatrao momba ny fanafody ADHD, dia ny tsy fanasitranan'izy ireo ny antony mahatonga ny aretina. Ny hany azon'izy ireo atao dia ny manamaivana ny soritr'aretin'ny ADHD. Ary koa, raha ampifandraisina amin'ny torohevitra na fitsaboana amin'ny fitondran-tena ireo fanafody ireo, dia tena afaka manampy betsaka izany.
Fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe
Ny aretina dia tsy aretina fotsiny amin'ny zaza. Mitranga amin'ny olon-dehibe koa izany! Na dia toa sarotra tantana aza izany dia misy fanantenana sy tombony tena tsara amin'ny fampiasana fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe.
Betsaka ny safidy amin'ny fisafidianana izay fanafody ADHD mety aminao. Azonao atao ny mihinana fanafody ADHD na manandrana fanafody voajanahary ho an'ny ADHD.
Raha te hahazo mari-panafody ho an'ny ADHD dia tsy maintsy voan'ny psychiatrist na neuropsychologist aloha ianao. Izany dia misy fanontaniana sy fitsapana matotra hamaritana izay subtype an'ny ADHD mety anananao. Izany dia hanampy amin'ny famaritana izay fanafody ADHD mety aminao.
Misy kilasy fanafody fanafody maromaro ho an'ny olon-dehibe manana ADHD. Ireo dia manomboka amin'ny stimulants ka hatramin'ny kilasy zava-mahadomelina hafa izay misy fiantraikany ankolaka amin'ny fanampiana soritr'aretina ADHD.
adderall: dia fitambaran'ny amphetamine sy dextroamphetamine. Safidy iraisana amin'ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe io. Adderall dia miasa amin'ny rafi-pitabatabana afovoany mba hanamorana ny fihenan'ny hyperactivity sy ny fanaraha-maso. Hanova ny fatrao ny dokoteranao mandra-pahatonganao drafitra fitsaboana sahaza anao.
ritalin (Methylphenidate): dia stimulant ny rafi-pitabatabana afovoany mitovy amin'i Adderall. Manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny hyperactivity sy ny fifehezana ny tsindrona izany. Ritalin dia fanafody mikendry ny soritr'aretin'ny ADHD sy ADD. Tolo-kevitra fa ity zava-mahadomelina ity dia ao anatin'ny programa fitsaboana manohana ny torohevitra sy ny fitsaboana hafa mba hampitombo ny fitsaboana ADHD.
Concerta (Methylphenidate): mihetsika tahaka an'i Ritalin ho toy ny stimulant ny rafi-pitatitra foibe. Concerta dia anarana marika iray hafa ho an'ity kilasin'ny zava-mahadomelina ity, ary koa Metadate.
Vyvanse (Lisdexamfetamine) dia fanafody ADHD vaovao kokoa ho an'ny olon-dehibe. Vyvanse dia azo ampiasaina tsara amin'ny ankizy manana ADHD mihoatra ny 6 taona. Izy io dia stimulant an'ny rafi-pitabatabana izay manamaivana ny soritr'aretin'ny hyperactivity, ny fifehezana ny tsimokaretina ary manampy ny olon-dehibe ADHD izay manana olana amin'ny fihinanana noho ny tsy fetezany. Ny antony mahatonga ny Vyvanse safidy tsara kokoa amin'ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe satria tsy dia misy vokany ratsy toy ny famoahana eo noho eo ny fanafody ADHD hafa.
Straterra: ity fanafody ity dia tsy manaitaitra, tsy toy ny fanafody ADHD hafa ho an'ny olon-dehibe. Straterra dia mpanakana ny norepinephrine reuptake, izay fomba fiasa mitovy amin'ny antidepressants sasany. Ny tena fomba fiasa amin'ny fitsaboana ADHD amin'ity zava-mahadomelina ity dia tsy fantatra. Saingy, heverina fa avy amin'ny fitomboan'ny norepinephrine ao amin'ny ati-doha. Norepinephrine dia mitana andraikitra lehibe amin'ny faharetan'ny saina sy ny fitondran-tenany. Straterra dia nanolorana azy ho anisan'ny programa fitsaboana izay misy fepetra ara-tsaina, fanabeazana ary ara-tsosialy hitsaboana ilay aretina.
Araka ny hitanao dia misy safidy maromaro hafa amin'ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fanafody mety indrindra aminao dia mila mitady toro-hevitra amin'ny dokotera ianao rehefa mandalina ny safidinao rehetra hahalalana izay azonao raisina amin'ny toe-pahasalamanao.
Fahasamihafana eo amin'ny fanafody ADHD sy XR prescription ho an'ny olon-dehibe
Samy hafa ny fandraisan'ny tsirairay ny fanafody ADHD. Mety handramana ny fanandramana fanandramana fanafody vitsivitsy izay mety mety aminao indrindra.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny famolavolana IR sy XR dia ny fotoana iasan'izy ireo. Amin'ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe, ny fotoana famoahana ny fanafody dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fitsaboana ADHD.
Ny famolavolana IR dia fantatra amin'ny hoe famoahana famoahana eo noho eo. Ireo formulasi ireo dia hiasa avy hatrany raha vao mihinana izy ireo. Miankina amin'ny filan'ny olon-dehibe manana ADHD, ny famolavolana IR dia mety mila omena matetika kokoa mba hisorohana ny fanafody mihalefaka.
Ny famolavolana ER dia navotsotra mihoatra ny ora. Manome fiandoham-pihetsiketsehana milamina kokoa izy ireo ary manana faharetan'ny fotoana iasan'izy ireo amin'ny vatana. Ity safidy ity dia mety ho safidy lehibe hampihenana ny voka-dratsin'ny olon-dehibe sasany manana traikefa ADHD amin'ny famolavolana IR. Ankoatr'izay, ny famolavolana ER dia safidy lehibe amin'ny olona izay manadino ny mandray ny fanafody amin'ny fotoana mety.
Fanafody ADHD voajanahary ho an'ny olon-dehibe
Miaraka, na tsy misy fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe aza dia misy vokatra voajanahary any izay mety ho safidy tsara amin'ny fitsaboana ADHD olon-dehibe. Alohan'ny handinihana fanafody ADHD voajanahary dia aza hadino ny mifanakalo hevitra momba ny safidy hataonao amin'ny dokotera.
Trondro maina: asidra matavy omega 3 dia voaporofo fa mampitombo ny fahaizan'ny saina amin'ny olon-dehibe manana aretina. Ny menaka trondro dia afaka manatsara ny hyperactivity, manatsara ny halavan'ny fifantohana ary mampihena ny fisainana tsy mazava. Azonao atao ny mandray menaka trondro ho kapsily na avy amin'ny sakafo toy ny salmon, tuna, trout ary sardine. Ny endrika kapsule dia tena mety. Ny menaka trondro avo indrindra natolotra ho an'ny ADHD dia avy amin'ny Nordic Naturals.
fanitso: fandalinana maro no naneho ny fihenan'ny hyperactivity sy ny impulsivity amin'ny fandraisana zinc supplement amin'ny olona manana ADHD. Ny fanadihadiana dia milaza fa ny marary ADHD olon-dehibe dia manana ambaratonga zinc ambany kokoa raha oharina amin'ny olona tsy manana izany aretina izany. Azonao atao ny mandray zinc amin'ny endrika kapsily na mahazo azy amin'ny sakafo toy ny voanjo, vokatra vita amin'ny ronono, tsaramaso, voamaina feno, ary voamadinika voa mafy. Raha mihevitra ny zinc ho famenon-tsolika ianao, ny marika famenon-tsoa faran'izay tsara tokony safidiana dia ny ANTONY Sakafo.
Melatonin: ity fanafody ity dia tsy voatery hanampy amin'ny ADHD mivantana. Ho an'ireo manana olana amin'ny torimaso, melatonin dia fanafody voajanahary manampy ny olon-dehibe hatory amin'ny alina. Ny olona manana ADHD tsy ampy torimaso dia manimba ny soritr'aretin'ny ADHD.
Ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe dia mety hanatsara ny kalitaon'ny fiainana. Raha mahatsapa olona ianao, na manana ny soritr'aretinao ADHD aza, aza matahotra ny ho voan'ny aretina. Ny fanafody ADHD ho an'ny olon-dehibe dia efa an-taonany maro. Voaporofo fa manampy amin'ny fitantanana amin'ny fomba mahomby ny aretina izy ireo. Olon-dehibe maro izay efa nihinana fanafody ADHD no tsy manenina amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo.
Ny fitsaboana ny fitondran-tena dia mety mitaky fotoana sy ezaka be dia be nefa ny valiny dia mety hitondra valiny lehibe. Ankoatr'izay, raha tsy tian'ny ray aman-dreny mihinana zava-mahadomelina ADHD ny ankizy, safidy tsara ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena. Ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena dia mitaky fanamafisana ny ankizy amin'ny famporisihana rehefa manao zavatra tsara ary koa sazy rehefa manao zavatra tsy mety (na izany aza, ny sazy dia tsy tokony hampiasaina matetika). Ny fitsaboana ara-pahalalana momba ny fitondran-tena dia manampy ny ankizy hanaiky ny eritreritra ratsy sy ny fomba hisorohana azy ireo. Tsy mitovy amin'ny fitsaboana fanafody, maharitra ny vokatry ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena. Miaraka amin'ny fomba mahitsy, ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena dia afaka manao zava-mahagaga hanampiana ny ankizy hitantana sy handresy ilay aretina.
Inona no fitsaboana tsara indrindra ho an'ny ADHD?
Araka ny voalaza etsy ambony, tsy misy fitsaboana tsara indrindra ho an'ny ADHD. Na izany aza, ny ray aman-dreny dia afaka mandray fanapahan-kevitra miorina amin'ny heviny manoloana ny zava-mahadomelina. Raha tsy tian'ny ray aman-dreny hampiasa zava-mahadomelina ny zanany dia mety ho safidy tsara ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena. Tsy mitovy amin'ny fanafody, ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena fotsiny dia afaka manampy ny ankizy hitantana tsara ny soritr'aretin'ny ADHD raha toa ka ampiharin'ny ray aman-dreny tsara izany. Saingy, tamin'ny alàlan'ny fampiharana, ny dokotera dia nanoro hevitra ny ray aman-dreny fa tokony hampiasa ny fitsaboana amin'ny fitondran-tena miaraka amin'ny fanafody ho an'ny vokatra farany ambony.